WASHINGTON — Canshuur kordhin dhinaca wax soo saarka ah oo ay isugu jawaabeen dowladaha Mareykanka iyo Shiinaha, oo ah kuwa ugu dhaqaalaha badan caalamka, ayaa maanta oo Khamiis ah dhaqan galay.
Mareykanka ayaa horraantii bishaan ku dhawaaqay in tariifo dhan 25% uu saarayo qaar ka mid ah badeecadda uu Shiinaha usoo dhaafiyo dalkaan Mareykanka. Canshuur kordhintan ayuu Mareykanka ka faa’iidi doonaa 16 bilyan oo doollarka Mareykanka ah.
Dhaqanka galka tariifada cusub ee ay isku rogeen labada dal ayaa kusoo beegmay maalin kadib marki wufuud ka kala socota Shiinaha iyo Mareykanka ay ku kulmeen Washington, si ay u xaliyaan muranka dhinaca ganacsiga ah ee labada waddan.
Mareykanka oo dhimaya qaxootiga Africa iyo Bariga Dhexe
Caalamka 26.09.2018. 15:22